Azonao atoro ahy ve ny fanatsarana ny lisitry Amazon?
Raha ny fahombiazan'ny fitantanana ny raharaham-barotra misimisy lozam-pifamoivoizana, ny mpandraharaha Ecommerce rehetra dia tokony hahafantatra ny fomba hanatsarana ny lisitry Amazon. Hatao inona? Satria ny lisitr'ireo vokatra tsara azo atao dia ny hany fomba iray ahafahana maneho bebe kokoa ny mpividy mividy any. Noho izany, raha fantatrao amin'ny hevitra fototra momba ny Search Engine Optimization (SEO) ianao, dia tsy misy mpitaingin-tsoavaly fa ny fanatsarana an'i Amazon dia ny fikarohana ny teny fikarohana. Ny zavatra dia azo atao ny manolotra afa-po amin'ny Amazon amin'ny alàlan'ny fikarohana. Ary ny fiheverana fa ny lalao marina dia anisan'ny fototry ny fikarohana lehibe indrindra eto, midika fa ny loha-hevitrao sokajinao dia tena manan-danja raha te-hanangona fivarotana fandefasana entana izay tena mivarotra - yokohama rehvide mueuek. Ary etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba hanatsarana ny lisitra Amazon tsara indrindra.
Fa alohan'ny hanombohantsika, eto no tena fototry ny fanatsarana ny fikarohana izay havoakantsika amin'ny lisitry ny vokatrao amin'ny Amazon - Product Title, Bullet Points, ary Product Description. Mariho anefa fa manoro hevitra mafy aho amin'ny fanombohana kickstart miaraka amin'ny fikarohana nataonao amin'ny teny fikarohana amin'ny fampiasana Google Keyword Planner ary tsy misy zavatra hafa. Ny fampiasana an'io fitaovana fototra io, izay noforonin'ilay goavam-pitadiavan'izao tontolo izao, dia afaka mametraka sary lehibe momba ny teny fanalahidy ianao ary mahatakatra ny glossary fototra ampiasain'ny mpividy entana amin'ny sehatra Amazon, fa ny sisa amin'ireo mpividy mavitrika mitady ny vokatra any an-kafa (ohatra, eBay, Alibaba, sns.). Ary rehefa nianatra ny tena fotokevitra aho dia soso-kevitra ny hisafidy iray amin'ireto fitaovana fikarohana sokajy manokana ireto, toy ny Keywordtool.io, ScientificSeller, Scope, na AMZ Tracker.
Fomba hanatsarana ny lisitr'ireo Amazon
Rehefa manana ny lisitra fototra amin'ny teny fanalahidy tianao ianao dia fotoana tokony hanombohana azy ireo amin'ny toerana tsara. Ireto manaraka ireto no hanehoana anao ny fomba hanatsarana ny lisitry ny Amazon amin'ny fizarana telo lehibe - Product Title, Bullet Points, ary ny Product Description - mba hahafahanao manatsara kokoa ny fisehoana eo amin'ny tampon'ny fikarohana iry e.
Dingana voalohany: Product Title
Lohateny Product dia mety ny toerana tsara indrindra hampidirina ny teny fototra sy ny teny fikarohana amin'ny ankapobeny araka izay azo atao;
Ny haben'ny Product Title Loharano dia omena mihoatra ny 200 isa;
Ny taratasy voalohany amin'ny teny manaraka rehetra dia tokony halaina;
Ny isa azo avela amin'ny isa ihany ("valo" dia tsy hanao na inona na inona raha tsy "8");
Ny lokon'ny loko / ny loko dia tsy tokony hampidirina ao amin'ny Product Title, raha tsy misy ny antsipiriany mahaliana.
Dingana faharoa: Bullet
Ny lisitry ny Bullet Points dia natao hamaritana ireo singa fototra sy tombontsoan'ny vokatra fomba madio sy mazava;
Tokony hijery fotsiny ny fampahalalana manan-danja indrindra momba ny vokatra, ary koa ireo teny fototra ifantohan'ny lasibatra;
Ampirisihina hanazava ny tarehintsoratra rehetra izay natao hiditra ao anaty boaty.
Dingana fahatelo: Product Description
Raha ny marina, dia misy dikan-teny amin'ny antsipiriany kokoa amin'ny Lisitry ny Bullet Points;
Ny vokatra momba ny vokatra dia antenaina ny hamaly ny hevi-dehibe ao amin'ny mpanjifa;
Tokony hanan-karena amin'ny teny fanalahidy, ary koa ny teny fanalahidy optimisma;
Zava-misy tsy manam-paharoa ny momba ireo singa manan-danja sy tombontsoa manokana.